Warqad furan oo ku socota Xoghayaha XKK Soomaaliyeed. |
Warqad furan oo ku socota Xoghayaha XKK Soomaaliyeed.
Kadib Wareysigii laanta Afka Soomaaliga ee BBC-da la yeelatey xoghayaha Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubada Koleyga Saciid Faarax iyo xidiga kubadda koleyga Qaranka Soomaaliya ciyaaryahan Faysal Aden ayaan waxaan go’aansadey in aan warqad furan u qoro xoghayaha Saciid Faarax islamarkaana aan u sheego qaladka iyo gefka uu ku sameeyay wiilkan Soomaaliyeed, madaama lagu qanci waayay daliilaha deel qaafka ee uu soo daliilsadey.
Ku: Xoghaye Siciid Faarax
Marka ugu horeyso waxaa masuuliyad daro ah oo ceeb kugu ah in Email ra’yi soo jeedin ah oo aad is dhaafsiisateen wiil Soomaaliyeed aad banaanka soo dhigto, adigoo is leh ku ceebee, kagana aargudo ka qayb galkii uu ka qayb galey cayaarihii magaalooyinka Afrika, madaama aadan raali ka aheyn haba yaraatee inuu u safto kooxda Garoowe magaceeda ku ciyaareysay tartankaas.
Taas badalkeeda waxaa kuu habooneyd inaad kooxda Garoowe oo kaalinta labaad kasoo gashey tartankaas aad u dirto hambalyo, intii aad waqti ku dhumin laheyd waxaan sharci aheyn islamarkaana soona dhaweysato ciyaaryahan Faysal iyo Cabdi Faras oo ka mid ahaa dhalinyaradii kaalinta weyn ee aan la qarin karin kasoo hoyay guulihii cayaarihii qaranka ee Tanzania ka dhici jirey, madaama aad tahey hada xoghayaha Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubadda Koleyga.
Marka labaad ciyaaryahan Faysal Aden dambi Qaran ma galin, ceebna kuma aha inuu email kugu weydiiyo ra’yigiisa, sida uu ka sheegay BBC-da, islamarkaana waxaa nasiib daro ah inaad noo sheegto in cayaarahanada Qaramada aan lacag lagu siinin marka ay wadankooda matalayaan.
Sida aan ognahey wadan walbo ciyaartooydiisa marka Qaranka looga yeero waxaa la siiyaa lacag iyo guno, iyo weliba abaalmarin, waxaana jira heshiisyo dhigaayo oo ku cad xeerarka caalamka, wadanka Canada aad degan tahey xataa waad ka soo ogaan kartaa in xulkooda Qaranka sida ay u maamulaan iyo qaabka kooxda Qaranka uu maamulo macalinka Qaranka.
Marka ma aqaan in faragalin kugu tahey shaqada macalinka Qaranka iyo ciyaartooyda uu soo xulanaayo ee ka dhaxeyso iyo aqoon daro maamul, waayo shaqo kuma lihid inaad ciyaartooy soo xusho ama aad erido sida ku cad xeerarka isboortiga, marka waxaa haboon inaad faraha kale baxdo howlaha macalimiinta iyo ciyaartooyda.
Marka ciyaaryahan Faysal Aden madaama uu yahey xirfadle ku shaqeysta ciyaarta kubadda koleyga islamarkaan uu leeyahay qubaro kale taliya arimaha heshiisyada kooxaha iyo Qaranka ceeb kuma aha inuu wax ku weydiiyo, islamarkaana waxaa habooneyd inaad jawaab ka siiso ra’yigii uu ku soo weydiiyay ?.
Halkii aad suuqyada iyo fadhi ku dirirada waraaqo wiil da’yar Soomaaliyeed oo aad dhali karto ku soo qorey aad wareejin laheyd.
Talo: Hadii aad rabto dabaaqtan iyo rag iska celin dhab ah, waxaa habooneyd in Baana Cali meel iska saarto madaama culeys iyo dulsaar ku yahey XSKK shaqadooda, inkastoo aan cadeynaayo in cayaaraha magaalooyin iyo Xiriirada wadamada aysan shaqo isku laheyn.
Dib u xusuusin waxaa docda kale inkirtey sidii aad ku soo heshey ciyaaryahan Faysal adoo ku faaney inaad geysay markiisii horeba kooxda Qaranka, adoo og sida laguugu soo xirey, waxaa meesha ka saartey in markii hore wada hadal kale yeelatey in Faysal Qaranka u dheelo nin wakiil ka ahaa oo degan USA, kasoo markii dambe la isla qaatey in ciyaaryahan Faysal Aden Qaranka u dheeli karo sidaasna uu kugu raacey,
Faysal dad baa ku keenay ha ku faanin hadaa geysay hadane hanoo aqriyin hadii aadan rabin in aadan geyneynin Qaranka waayo Qaranka cidna marti kaagama aha,ma jirto jecloow ama necboow, daafaca Qaranka waa loo siman yahey qof kastana waajib ayay ku tahey.
Ciyaaryahan Faysal Aden mid ayaa gef ku noqon laheyd haduu go’aansan lahaa inuu Qaranka lacag ku xiro inuu u dheelo madaama aan ognahey xaalada lagu jiro, balse ra’yi uu ku soo qorey inaad la cararto weerar ku qaado oo xataa BBC-da ka daac daacsato, iyadoo wariyaha wax fel celin ah kugu sameynin, waxay ku aheyd sharaf daro iyo masuuliyad daro tii ugu liidatey ,waayo hada ma aheyn waqti aad noo sheegto waxa uurka kaaga jiro waayo hadii Faysal Qaranka ka hari lahaa oo lagu weydiin lahaa muxuu u harey ayay aheyd inaad hadaladaan sheegto, marka Ilaah baa ku fashiliyay oo badbaadiyay ciyaaryahankaan Soomaaliyeed ee sharafta badan ee kor u qaadey magacii Qaranka Soomaaliya ee rabta ku bahdisho waxaan go’aan rasmi aheyn oo un ku ekaa fikir is weydaarsasho, waayo Faysal warqad uma qorin ruux kale oo aan aheyn adiga emailka, sababta ugu jawaabi weysay, adiga iyo Axmed Muuse meelaha ula wareegeyseen waxay mudan tahey in wax la idinka yiraahdo.
Ciyaaryahan Faysal Aden wuxuu cadeeyay inuusan dambi galin islamarkaana weydiin karo su’aal xoghayaha, hadane diyaar u yahey Qaranka Soomaaliya u dheelo, iyadoo Siciid Faarax uu ku xirey shuruud ah inuu raali gelin shaqsiyan u soo diro, kadibna uu sidaasi Qaranka ku raaci karo, waxaa yaab ah maxaa iska galey dheelitaanka Qaranka iyo rabitaanka shaqsi ku sifoobey sheegasho awood uusan laheyn?.
Hadaba waxaan warqadatan ugu sheegayaa in Siciid Faarax raali gelin buuxda uu siiyo ciyaaryahan Faysal Aden, ciyaaryahan Cabdi Faras, iyo macalimiintii hore ee uu qoraaladiisa ugu gafey, islamarkaana XSKK sida gudoomiyaha Cadaani waxaa la rabaa isna inuu arinkaan soo faragaliyo degdeg, howsha is kor saaran loo kale furdaamiyo, waayo Faysal Aden waqtigaan xaadirka ah Qaranka Soomaaliyeed ayaa u baahan, isna diyaar ayuu u yahey inuu Qaranka ka daafaco garoomada caalamka, mana jiro sabab looga reebo Qaranka, hadii uu xoghaye Saciid raali galinaayo ama uusan raali galeynin waa howl labadooda u taal oo shaqsiyan ah, hada kadibna in waxaan oo kale dhacaan looma baahno.
Isboortigu waa inuu noqdaa mid dadka isku keena, kana shaqeeya sidii bulshada Soomaaliyeed looga gudbin lahaa marxaalada xun ee dalkeena iyo dadkeenaba ay ku sugan yihiin maanta, xaaladana waa in la qaboojiyaa u dhaxeyso macalimiintii hore iyo xoghayaha kuwaasoo waraaqo isku dhaafsadey shabakadaha, masuul qofkii rabo inuu noqdo ama sii ahaado waa in la yimadaa dulqaad iyo howlkarnimo hufan.
Balanteenu waa hore ha loo socdo tafaaruqa bahdii hore xal laga gaaro yaanan la soo gelin mustaqbalkii dalka
Macalin Qaranka Axmed Dahir oo hada faraha ku haya diyaarinta ciyaartooyda Qaranka ee ka qayb galaya cayaaraha bariga iyo bartamaha Afrika waxaa la gudboon inuu arinkaan dhexgalo, waxna ka qabto islamarkaana ciyaaryahanada kale ah Faysal Aden iyo Cabdi Faras Qaranka ugu yeeraa si loo wajaho cayaaraha Soomaaliya ku soo wajahan.
Ciyaaryahan Faysal Aden ha u noqoto barasho iyo inuu fahmo in dadka uu kale hadlaayo sida isboortiga horumarey uu maanta u shaqeeyo inaysan aheyn dad heerkaas gaarsiisneyn.
XSKK waxaa muhiim u ah inay midnimadooda ka shaqeeyaan iyo kale qaybsanaanta weyn ee ku kale dhex jirta, islamarkaana dhalinyarada Soomaaliyeed aysan sameyn ku yeelan xurgufta dhextaal.
Qalinkii Turxaanbixinta isboortiga Soomaaliya
W/Q: Yusuf Yusuf